सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, आज कतिमा होला कारोबार ? - ramechhapkhabar.com
सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, आज कतिमा होला कारोबार ?
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ प्रतितोला २०० रुपैयाँ र चाँदी ५० रुपैयाँले घटेको हो ।
बुधबार प्रतितोला ९२ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छापावाल सुन आज बिहीबार ९२ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैगरी यसअघि ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजावी सुन आज प्रतितोला ९१ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको महासंघको जनाएको छ । त्यस्तै, महासंघका अनुसार बुधबार एक हजार २५० रुपैयाँ रहेको चाँदीको भाउ आज बिहीबार एक हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ ।
६ वटा निर्माण कम्पनी एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ। मापदण्ड पु¥याएर काम नगर्ने, तोकिएको समयमा काम नसक्ने लगायत विभिन्न कारण देखाई ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुमा एलिट कन्स्ट्रक्सन, निलगिरी निर्माण सेवा, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएनसी निर्माण सेवा, एसएमएस कन्सट्रक्सन र त्रिदेव निर्माण सेवा रहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय लहानको सिफारिसमा निलगिरि निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सिफारिसमा एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तथा तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँको सिफारिसमा च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई÷दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएकोे छ । यसैगरी एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि, त्रिदेव निर्माण सेवा र एसएनसी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ।